Làlan'ny haino aman-jery sosialy mankany amin'ny faharetana lava eo ambanin'ny GDPR | Martech Zone
Sabotsy, Oktobra 28, 2017 Sabotsy, Oktobra 28, 2017 Josie Scotchmer
Mandany andro mandeha manodidina an'i Londres, New York, Paris na Barcelona, ​​raha ny marina, ny tanàna rehetra, ary mety hanana antony inoana ianao fa raha tsy nozarainao tamin'ny media sosialy dia tsy tanteraka izany. Na izany aza, ny mpanjifa any UK sy France izao dia milaza ny hoavin'ny media sosialy hafa tanteraka. Manambara ny fikarohana fanantenana tsy manjombona amin'ny fantsona media sosialy satria ny 14% amin'ireo mpanjifa ihany no matoky fa mbola hisy i Snapchat ao anatin'ny folo taona. Saingy mifanohitra amin'izay, nipoitra ny mailaka satria ny sehatra iheveran'ny olona fa haharitra amin'ny fotoana.
Ny valin'ny Mailjet's Ny fikarohana dia manondro fa ny sehatra vaovao dia heverina ho fironana vetivety, fomba fifandraisana maharitra, na dia eo aza ny Snap, orinasan-dRamatoa Snapchat IPO-ing tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Na izany aza, raha ny fahitana ny lalàna, ny hoavin'ny fanentanana ara-tsosialy sy ny mpihaino dia miankina amin'ny fanekena mazava araka ny ahitantsika ny fampidirana General Data Protection Regulation (GDPR) amin'ny Mey amin'ny taona ho avy. Hatsipy ao amin'ny tontolon'ny misafidy-in ny marketing sy ny fifanakalozana ho an'ny mpanjifa dia mety tsy hitovy intsony…
Inona ny GDPR?
Ny EU General Data Protection Regulation (GDPR) dia nanolo ny Data Protection Directive 95/46 / EC ary natao hampifanarahana ny lalàna momba ny tsiambaratelo momba ny data momba ny fiainana manokana eropeana, hiarovana sy hanomezana hery ny fiainam-pirenena momba ny fiainam-pirenena ary hamolavola ny fomba fanaovan'ireo fikambanana manerana ny faritra ny angon-drakitra. ny fiainana manokana. Daty fampiharana: 25 Mey 2018 - amin'izany fotoana izany ireo fikambanana tsy manara-dalàna ireo dia hiatrika lamandy mavesatra. Pejy Fandraisana GDPR
Vonona toy inona ny marika hanaraka ny GDPR? Ny Instagram Stories, Snap Ads, ary ny Pinterest Pins dia samy nahita ny fivoaran'ny marika tany amin'ny habaka sosialy, saingy tsy mila miantoka fahazoan-dàlana azo tsapain-tanana avy amin'ireo mpampiasa izany. Ahoana no fomba hifanarahan'ny marika amin'ity tontolo vaovao ity, sy hifaneraserany amin'ireo mpihaino izay mifehy tanteraka ny fahazoana mombamomba azy ireo?
Mifanaraka amin'ny fanovana
Ny fampiharana ny GDPR dia hanamafisana ny fiarovana ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fampiharana lalàna henjana kokoa momba ny tsiambaratelo momba ny tsiambaratelo ary fampidirana opt-in indroa. Manomboka amin'ny Mey amin'ny taona ho avy, ny marika dia tokony hitandrina bebe kokoa amin'ny fomba sy ny fotoana ifandraisany amin'ny mpihaino. Na dia eo aza ny fanarahana ny lalàna dia iray amin'ireo olana lehibe indrindra atrehin'izy ireo, ny marika ihany koa dia mila manome toky fa manentana ny mpanatrika hanomezana alalana bebe kokoa ny angon-drakitra harahin'izy ireo sy ny doka ho azy manokana.
Ny marika dia tsy maintsy manaporofo ara-dalàna fa ny vinavinany rehetra nifaneraserany dia nanaiky marimaritra iraisana fa te-hivarotra izy ireo; boaty opt-out tsy voafidy dia tsy ampy. Mba hitazomana ny olona hirotsaka sy hisoratra anarana, ny marika dia tsy maintsy mihetsika hatrany amin'ny filany sy ny zavatra mahaliana azy ireo, manolotra traikefa tadiavin'izy ireo isaky ny fantsona.
Hila asa sy fikirizana be ho an'ireo orinasan-tserasera sy marika amin'ny tambajotra sosialy hahazoana antoka fa eo an-toerana ny mpijery. Ohatra, rehefa nanontaniana momba ny fanavaozana lehibe ny fifandraisana amin'ny marika amin'ny alàlan'ny fantsona sosialy, 6% monja amin'ireo mpanjifa no nahatsikaritra ny Instagram fividianana bokotra ary ny fanovana ny pejy Hanadihady ny lampihazo.
Ity dia manondro mazava tsara fa tsy mahatsikaritra mavitrika ny fanovana ny fantsona ampiasain'izy ireo ny mpanjifa raha tsy tena misy fiatraikany amin'ny fampiasany andavanandro. Mba hahazoana fanekena amin'ny marketing, ireo sehatra ireo dia tsy maintsy mivoatra mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa ary mitazona ny traikefa tsy misy tohana amin'ny alàlan'ny teknika famolavolana sy ny personalization.
Mialà amin'ny alàlan'ny mailaka
Ny doka marika amin'ny fiaraha-monina dia tsy mila miantoka velively fa mahazo 'opt-in' alohan'ny hahitan'ny mpanjifa azy ireo, na izany aza, ny fantsona dia afaka mifampianatra momba ny fomba hifanaraka tsara amin'ireo lalàna mananontanona. Ireo sehatra toa an'i Snapchat dia mamorona buzz amin'ireo demografika sasany amin'izao fotoana izao, fa ny mailaka kosa dia fantsona iray izay hitodihan'ny mpanjifa hatrany amin'ny dia mividy.
Malina ny mailaka. Namaly ny fomba fampiasan'ny mpanjifa ny tranokala fiantsenana amin'ny fomba mbola tsy ananan'ny fiaraha-monina izany. NY fikarohana nahita fa efa ho ny ampahatelon'ny mpiantsena no mitady ny fahaizana miantsena na mizaha mivantana ao anaty mailaka iray mba hampandeha tsara ny dia sy ho mora vita. Ny mailaka dia manjary miha-mivoatra amin'ireo entana izay nanaovan'ny olona fikarohana na mifameno amin'ireo vokatra novidiny vao haingana.
Raha toa ny mpanjifa mihombo hatrany ny fiankinana amin'ny media sosialy, izy ireo koa dia azo ovaina be ary mety tsy dia lavitra antsika ny mahita ilay boaty nentim-paharazana efa novaina tanteraka tamin'ny serivisy fandefasan-kafatra mailaka toa ny Slack sy Messenger. Orinasa maro no efa manandrana mampihena ny fifamoivoizana amin'ny mailaka amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo fantsona ireo any amin'ny biraony.
Slack sy Messenger dia efa dingana vitsivitsy mialoha ny sosialy satria hainy ny mamorona fanekena. Ny fandefasana hafatra, na fizarana atiny amin'ny alàlan'ny fantsona dia mitaky opt-in izay matetika atao amin'ny alàlan'ny OAuth 2.0 (sehatra indostrialy ahafahana manana fidirana amin'ny angon-drakitry ny mpampiasa).
Ao amin'ny Slack, anjaran'ny mpampiasa no mamaly hafatra hahazoana ny vaovao tadiavin'izy ireo. Ohatra, ny fampiharana tsara indrindra amin'ny Slack dia manomboka amin'ny endrika resaka am-boalohany:
Hey, nahazo vaovao vaovao momba ny faritry ny ririnina vaovao izahay - misy zavatra tianao ho re bebe kokoa ve?
Avy eo ny mpampiasa dia manapa-kevitra raha te hifandray amin'ny marika izy ireo. Ny resadresaka ifanaovana roa no fomba azo antoka sy azo antoka indrindra amin'ny ho avy GDPR.
Ho an'ny mpihaino dia midika fihenan-danja lehibe amin'ny SPAM tsy ilaina izany, nefa izy io koa dia miara-miasa amin'ny taranaka tanora sy arivo mandavantaona izay maniry ny votoatiny azo ovaina sy mora vidy amin'ny fomban'izy ireo manokana. Rehefa akaiky sy manakaiky ny tsara indrindra amin'ny fifanakalozan-kevitry ny mpanjifa ny mailaka, ireo goavam-be eo amin'ny sehatry ny fiaraha-monina dia mety handray lesona lehibe amin'ny mailaka momba ny fomba fampifanarahana, fanavaozana ary fahamatorana azy.
Tags: fanarahana ny dokafanarahan-dalànafanarahana ny mailakaFitsipika ankapobeny momba ny fiarovana ny tontolo iainanaOAuth 2.0fanarahan-dalàna amin'ny media sosialy
Josie Scotchmer no mpitantana marketing ao Mailjet, sehatra mailaka marketing Ary sehatra mailaka transactional. Josie dia mpitantana varotra B2B2C mafana fo amin'ny fomba ara-barotra amin'ny fifandraisana amin'ny marketing.
Vonona ho an'ny CES ve ny marika fanombohana anao? Lisitry ny fizahana marika ilaina amin'ny voalohany